ဒီ virus ကိုဘယ်လိုသတ်ရမလဲ ? - MYSTERY ZILLION
ဒီ virus ကိုဘယ်လိုသတ်ရမလဲ ?
ကျွန်တော့်စက်မှာ မနေ့ကစပြီး ဒီvirus ၀င်ပါတယ် . . . ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ Task Manager, System Restore တို့ Msconfig, Cmd တိုဖွင့်လို့မရဘူး။ ဖွင့်လိုက်ရင်လဲ Shut down ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်။ လက်ရှိလောလောဆယ် AVG တင်ထားပါတယ် . . . ဒါပေမယ့် AVG က အဲဒီVirus ကိုမသိဘူး . . . အင်တာနက်ဆိုင်တစ်ခုကကူးတာပါ . . . Virus ပါတဲ့ Mem Strick ကို Scan စစ်တော့လည်း မသိဘူး . . .ဘယ်လိုသတ်ရမလဲဆိုတာကို တစ်ဆိတ်လောက်အကြံပေးကြပါအုံး . . .
အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် . . .
safe mode ကနေ restore လုပ်ကြည့်ပါလား.....smart virus remover software ကို use ပါလား...internet ကနေ download လိုက်ပါလား..task manger ဘာတွေညာတွေ ပြန် ပြီး open လာပါမယ်....ဒါမှမရရင်...hiren boot CD နဲ ့boot တတ်ပြီး window file မဟုတ်တာတွေကို delete လုပ်ကြည့်ပါလား...fri computer ကိုမမြင်ရတော့ပြောရတာခတ်တယ်....task manager ဘာတွေပျောက်တာကတော့...virus တော််တော်များလုပ်တတ်ပါတယ်
mgy.exe virus ထင်ပါတယ်။ ပိုပြီးသေချာအောင် mycomputer right click နှိပ်။ system restore ကိုရှာကြည့်ပါ။ မရှိပါက သေချာပါတယ်။ အဲဒီ virus ဆိုပါက Hiren Boot CD နဲ့ စက်ကို boot တက်အောင်လုပ်လိုက်ပါ။ ctl + alt + del နဲ့ task manager ကိုခေါ်လိုက်ပါ။ process မှာ mgy.exe (or) csrss ဆိုတဲ့ process ကိုအရင်သတ်ရပါမယ်။
အဲဒီနောက် command prompt ခေါ်ပြီး dos mode ကနေ c:, d:, e: အောက်မှာ ရှိနေတဲ့ mgy.exe , autorun.inf အဲဒါအားလုံးကိုလိုက်သတ်ရပါမယ်။ mgy.exe virus ရှင်းတဲ့နည်းကို ဒီ MZ ရဲ့ post မှာလဲရှာကြည့်လို့ရပါတယ်။ kasper, AVG ကအဲဒီ virus ကိုမသိပါ။
သူများတွေကို ၀င်းဒိုးပြန်တင်ပေးရတာ စက် ၃ လုံးရှိသွားပြီ.......
ဒီက Virus ပဲနဲ့တူတယ်.........
mgy.exe အကိုက်ခံရတဲ့ windows ဟာပြောင်အောင်ရှင်းနိုင်ပေမယ့် ဒဏ်ကျန်ခဲ့ပါတယ် ဒါကြောင့် windows ပြန်တင်တာကတော့
အကောင်းဆုံးပေါ့ နောက်မှ error တွေကလာတတ်ပါတယ်
သူကိုရှင်းနိုင်တဲ့ tools တွေကတော့ tasker killer ပါပဲ
နောက် bitdefender ကတော့ သတ်နိုင်တယ် ESET ကတော့ မသတ်ပေးနိုင်ပေမယ့် ကာပေးပါတယ်
ဒါပေမယ့် သူက ၀င်ပြီဆို တခြား partition တွေမှာလဲရှိနိုင်ပါသေးတယ် system32 ထဲမှာလဲ၇ှိနိုင်ပါသေးတယ် အဓိက ကတော့ windows ၇ဲ့ ဘယ်အပိုင်းကိုထိခိုက်အောင်လုပ်တာလဲဆိုတာ့
အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် . . . လုပ်ကြည့်လိုက်ပါအုံးမယ် .. .